5 Dhismeyaasha Ugu Caansan Maraykanka | Safarka Absolut
Bari ilaa galbeed, Mareykanku waa waddan weyn oo leh qaar ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan adduunka. Midkood waa Washington, oo ah xuddunta awoodda siyaasadeed iyo dhaqaale ee waddanka. Magaalada caasimada ah waxaan booqan karnaa dhowr dhismeyaal caan ah oo aad muhiim ugu ah taariikhda wadanka kuwaas oo kasoo muuqday aflaam badan. Ma rabtaa inaad ogaato waxa ku saabsan? Akhriska sii wad!
1 Aqalka Cad
1.1 Ma booqan karaa?
2 Katidralka Washington
3 Xusuusta Jefferson
4 Capitol-ka Mareykanka
5 Xusuus-qorka Lincoln
5.1 Ma booqan karaa?
Hoyga rasmiga ah iyo goobta shaqada ee Madaxweynaha Mareykanka, Aqalka Cad, waa mid kamid ah dhismooyinka ugu caansan dalka waana astaan.
Waxaa la dhisay kadib markii Xeerka Koongarasku uu dhacay sanadkii 1790 qaab qaab neoclassical ah oo uu bilaabay hindisaha George Washington, iyadoo la aasaasay baahida loo qabo in la dego hoy madaxtooyo oo u dhow Webiga Potomac. Shaqooyinka waxaa loo xilsaaray naqshadeeyaha James Hoban oo ay ku dhiirrigelisay qalcadda Rastignac ee Faransiiska naqshadeynta oo qaadatay wax ka yar toban sano si loo dhammaystiro. Si kastaba ha noqotee, Madaxweyne Washington waligiis uma imaanin inuu dego dhismaha cusub laakiin waxaa daah furay dhaxal sugaha John Adams.
Dhismihii asalka ahaa ma sii raagin markii askarta Ingriiska ay burburiyeen 1814 iyagoo ka aargudanaya gubitaankii baarlamaanka ee Kanada, sidaa darteed Mareykanku waxay ku qasbanaadeen inay dib u dhisaan xilligaa loogu yeeri jiray "Guriga Madaxweynaha." Tan iyo markaas, kordhinno kala duwan iyo horumarin ayaa lagu sameeyay qaabdhismeedka. Xafiiskii caanka ahaa ee Oval iyo West Wing waxaa la dhisay 1902-dii intii uu madaxweynaha ahaa Roosvelt. halka garabka bariga lagu daray intii uu xilka hayay Truman. Sidaas ayaa lagu dhammeeyey dhismaha aan maanta naqaan.
Waxay ku taalaa 1.600 Pennsylvania Avenue ee Washington, Aqalka Cad waxaa loo yaqaanaa wajigiisa dambe, midka leh colonnade-ka bartamaha. Bannaanka, cabirkiisu wuxuu u muuqdaa mid ka yar oo in yar uun baa garanaya cabirkiisa runta ah: in ka badan 130 qol, 35 musqulood, ku dhowaad 30 meel dabka lagu shito, jaranjarooyin 60 iyo 7 wiish ah oo ku faafay 6 dabaq iyo 5.100 mitir murabac ah.
Ma booqan karaa?
Agagaarka Aqalka Cad waa Xarunta Booqdayaasha ee Aqalka Cad, oo u furan dadweynaha. Booqashada Aqalka Cad ee loo maro booqashada gudaheeda waa u suurta gal kaliya muwaadiniinta Mareykanka. Iyagu waa bilaash laakiin waa inaad bilo sii qabsato bilo kahor adigoo qoraal u diraya wakiilka Koongaraska. Dadka ajaanibta ah waqtigan macquul uma ahan sidaa darteed waa inaad degto inaad Aqalka Cad ka aragto banaanka.
Mid ka mid ah cathedral-ka ugu quruxda badan bariga Mareykanka waa Washington National Cathedral. Waa tan labaad ee ugu weyn dalka ka dib Basilica-ka ee Xaramka Qaranka ee Fikirka Nadaafadda ee Degmada Columbia (aad ugu dhow Washington) iyo kan lixaad ee ugu weyn adduunka.
Neo-Gothic qaab ahaan, Washington National Cathedral waxay aad uxasuustaa basilikooyinkii waaweynaa ee Yurub waxayna u heellan tahay Rasuullada Saint Peter iyo Saint Paul. Waxaa la dhisay qarnigii XNUMX-aad wuxuuna ka tirsan yahay Kaniisadda Episcopal ee dalka Mareykanka.
Haddii inta lagu jiro fasaxa aad ku joogto Washington aad jeclaan lahayd inaad booqato macbudkan, Waxaad ka heli doontaa isgoyska u dhexeeya Wisconsin iyo Wadooyinka Massachusetts, waqooyi-bari caasimadda. Waxaa loo qoray taallo taariikhi ah oo ku taal Diiwaanka Qaranka ee Goobaha Taariikhda iyo xiisaha, haddii aad eegto munaaradda woqooyi waxaa ku yaal gargoyle leh koofiyad uu leeyahay Darth Vader oo ka socda Star Wars. Aan caadi ahayn, sax?
Dhaqan xumadan caanka ah ayaa ku dambaysay inay ka mid noqoto cathedral-ka sababta oo ah majaladda National Geographic World ayaa qabatay tartan naqshadeynta carruurta ah halka tartame Christopher Rader uu kaalinta saddexaad ka galay sawirkan. Tartanka ka dib, shaxanka waxaa lagu xardhay sawirada kale ee guuleysta (gabadh tidcan leh, rakoon iyo nin dallad leh) si loo qurxiyo dusha sare ee munaaradda woqooyi-galbeed ee Washington Cathedral.
Thomas Jefferson waa shaqsi muhiimad weyn ku lahaa taariikhda Mareykanka. Wuxuu ahaa khabiirkii ugu weynaa ee cadeeya madaxbanaanidiisa, xoghayihii uhoreeyay ee wadanka ee dowladii George Washington, wuxuu kamid ahaa aabayaashii aasaasay qaranka iyo madaxweynihii sadexaad kadib markuu badalay John Adams. Ugu dambeyntiina, gudaha Mareykanka waxaa jira waxyaabo badan oo lagu xusuusto Thomas Jefferson iyo taallo uu u heellan yahay xusuustiisa.
Xusuusta waxay ku taalaa hawada furan West Potomac Park, oo ku taal daanka Webiga Potomac. Waxaa amar ku bixiyay in la dhiso Madaxweyne Franklin D. Roosvelt sanadkii 1934 maadaama uu aad u jeclaa siyaasiga. Naqshaddeeda naqshadeeyaha waxaa dhiirrigeliyay Monticello, guriga Thomas Jefferson, kaas oo isna loo waxyooday Pantheon-ka Rome.
Haddii bannaanka xafladda xusuusta ee Jefferson ay qurux badan tahay, gudaha gudaheeda waa wax lala yaabo maxaa yeelay waxaa lagu sharraxay qoraalo xigashooyin caan ah oo ka yimid madaxweynahan iyo xitaa jajabyo ka mid ah Baaqa Mareykanka ee Madaxbannaanida.
Waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu quruxda badan Washington ee ku yaal xaafadda Capitol Hill waana astaan ​​astaan ​​u ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Awoodda sharci dejinta ee dowladda Mareykanka waxay ku urursan tahay halkaas: Aqalka Wakiilada iyo Guurtida.
Capitol-ka Mareykanka waxaa naqshadeeyay William Thornton oo marxaladdii ugu horreysay la dhammaystiray horaantii XNUMX-meeyadii. Markii dambe, nashqadeeyayaal kale ayaa sameeyay dib-u-habeyn kuwaas oo siiyay kakanaanta qaabka astaamaha neoclassical.
Marxaladda koowaad waxaa la dhammaystiray 1800 waana mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan magaalada. Nashqadeeyayaasha Thomas U. Walter iyo Ogosto Schoenborn ayaa naqshadeeyay qubbada hadda ku yaal bartamaha dhismaha ay dusha ka taagtay taallo dheddig ah, qaabkeeda oo meel fog laga arki karo maaddaama waddooyinka Maryland iyo Pennsylvania ay halkaas ku dhammaanayaan.
Kuwii doortay goobta laga dhisayo Capitol-ka Mareykanka waxay musbaar ku dhufteen madaxa maxaa yeelay joogitaanka buur waxay umuuqataa xitaa mid ka weyn, taas oo tusaale fiican u ah astaamaha awoodda..
Dhismayaasha kale ee ugu caansan Mareykanka waa Lincoln Memorial, oo ah taallo qurux badan oo loogu talo galay sawirka Abraham Lincoln, madaxweynihii lix iyo tobnaad ee dalka.s oo ku dhex taal baarkin ku yaal bartamaha caasimadda oo loo yaqaan 'National Mall'. Halkan waxaa ku yaal taallooyin kale oo muhiim ah sida Obelisk of Washington, taalada General Grant iyo taalada Lincoln, saddex qof oo aad ugu habboon taariikhda Mareykanka.
Waxaa la daahfuray 1922, Lincoln Memorial waa dhisme qaab u ah macbudka Griiga oo Golaha Qaranka ay doonayeen inay dhisaan si ay u sharfaan siyaasiga caanka ah. Jaranjaro weyn ayaa u socota qol aan ku arki karno taalo weyn oo ah Abraham Lincoln (oo uu qoray Daniel Chester French), muraayadaha kala duwan ee gudaha iyo laba qoraal oo ay ku jiraan qaybo ka mid ah khudbadaha madaxweynaha.
Sannadkii 1963dii ayaa Lincoln Memorial waxaa ka dhacay khudbadda caanka ah ee "Waxaan Leeyahay Riyadayda" oo uu jeediyo wadaadka iyo u dhaqdhaqaaqaha xuquuqda madaniga Martin Luther King Mall-ka Qaranka waxa kale oo aad ku arki kartaa taallo loogu talo galay sawirkiisa oo dhawr mitir u jirta xuska.
Gelitaanka Xusuusta Lincoln waa bilaash waxayna furan tahay 8 subaxnimo ilaa 12 subaxnimo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » 5 dhismayaasha ugu caansan Mareykanka
Rickshaw, gaadiidka dhaqameed ee Shiinaha